ကြော်ချင်လား ၊ သုတ်ချင်လား ဒီတိုင်းစားချင်လား | The Restaurant Guides for Myanmar
မွှေးရှယ်တို့ဟူးမူန့်ကိုအသုံးပြု၍...တိုဟူးနွေး ၊ တိုဟူးသုတ် ၊ တိုဟူးကြော် ပြုလုပ်နည်း ။
မွှေးတို့ဟူးမူန့်ကိုမိမိတို့ကြိုက်သည့်မည်သည့်ချင်ခွက်နှင့်မဆိုချင်နိုင်ပါသည်.ဥပမာ နို့ဆီခွက်. အကြမ်းခွက်.ပေါင်းအိုးဆန်ချင်ခွက်.တူစားပန်းကန်လုံး စသဖြင့်..ရေနှင့်တို့ဟူးမူန့်အချိုးမှာ...တို့ဟူးမူန့် ၂ခွက် +ရေ ၅ခွက်ဖြစ်ပါတယ်.ရေချင်ခွက် အရွယ်အစားကလည်း တို့ဟူး မူန့်ချင်ခွက်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ရပါမယ်.
မြန်မာစတိုင်ကျိုမည်ဆိုပါက ရောင်းတမ်းဝင်တို့ဟူးကျိုရင်တို့ဟူးကိုပိုမိုခဲစေရန်အတွက် တစ်ချို့ကျိုနည်းတွေမှာ
ထုံးရည်ကြည်ကိုထည့်၍ကျိုကြပါတယ်..အခုကျိုပြထားတဲ့နည်းက အိမ်စားအနည်းငယ်သာဖြစ်သောကြောင့် ထုံးရည်ကြည်အစား မွှေး ကော်မူန်အနည်းငယ်ကိုသာထည့် ကျိုထားပါတယ်.ကော်မူန့်ထည့်ကျိခြင်းအားဖြင့် ပို၍စီး ထွေးနူးညံ့မူကို ရသည့်အပြင် အခဲလည်းမြန်ပါတယ်..တို့ဟူးကြော်ရင်လည်း ပို၍ကြွပ်ရွမူကိုခံစားရပါတယ်.
သဘောတရားလေးတွေကို ရှင်းပြပြီးပြီဆိုတော့ စကျိုရအောင်နော်..
_ မွှေး တို့ဟူးမူန့်တူစားပန်းကန်နှစ်ခွက်
_ မွှေး ကော်မူန့် ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်းမောက်မောက်
ရေတူစားပန်းကန် ငါးခွက်ခွဲရေကို ငါးခွက်ခွဲထည့်ရခြင်းမှာ ကော်မူန့်အတွက်ပိုထည့် ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
_ နနွင်းမူန့် ဇွန်းဖျားခန့်
_ အရသာမူန့် သုံးစွဲပါက teaဇွန်း၏လေးပုံတစ်ပုံ
_ ဆီထမင်းစားဇွန်း သုံးဇွန်း တို့ဖြစ်ပါတယ်..
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးကို blender ထဲတွင်ထည့်၍ မွှေပေးပါ.အမူန့်နဲ့ရေကို နာနာမွှေပေးပါ.လက်နဲ့မွှေတာထက်စာရင် စက်နဲ့မွှေတာဟာ ပိုကောင်းပါတယ်..အခဲအလုံးတွေ မကျန်ခဲ့စေပဲ တို့ဟူးအသားကို ပို၍ချောမွတ်စေပါတယ်.
ကျိုမည့်အိုးထဲကို စက်ဖြင့်မွှေထားတဲ့ အရည်တွေထည့်ပါ.မီးဖွင့်ပါ.မီးဖွင့်လိုက်ပီဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းယောင်းမ
ဖြင့်အဆက်မပြတ်မွှေပေးရပါမယ်.တစ်ချက်လေးမှနားလို့မရပါဘူး..နားလိုက်တာနဲ့ အိုးအောက်ခြေမှာ ပဲမူန့်တွေချက်ချင်းခဲကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်..
.မွှေသည့်အခါမှာလည်းယောင်းမကိုဦးတည်ချက်တစ်ဖက်တည်းကိုပဲထား၍မွှေပေးပါ.ဆိုလိုတာက လက်ယာရစ်ကိုမွှေနေရင် အဲ့ဒီအတိုင်းတစ်ဖက်တည်းပဲထား၍မွှေပါ.ဒါမှ တို့ဟူးအသားကပိုမိုနူးညံမှာပါ. အလုံးအခဲတွေမဖြစ်နေမှာပါ ဒီအချက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်.
တဖြေးဖြေး ရေလည်းခမ်း တို့ဟူးတွေလည်းစ၍ပျစ်လာပါမယ်..ဆက်၍နာနာမွှေပေးပါ.ပဲစိမ်းနံပျေက်သည်ထိ
ကျိုပေးပါ.ပဲစိမ်းနံပျောက်ရင်တို့ဟူးအသားကိုယောင်းမဖြင့်ကော်ကြည့်ပါ. ယောင်းမအပေါ် ခဲပြီးကပ်လာရင်ရပါပီ..ဗန်းထဲသို့ထည့်၍အအေးခံထားပါ..လုံးဝအေးစက်သွားမှ မိမိတို့လိုချင်သည့်ပုံစံလှီး၍ ချက်ပြုတ်နိုင်ပါပြီ..
.. ကြက်သွန်နီ ဖြူဆီချက်ဝါ..
.. နံနံပင်ဂေါ်ဖီ ရှောက်ရွက် ပါးပါးလှီး ထည့်
.. ပဲကျက်မူန့် တို့ကို တစ်ပွဲစာသင့်ရုံထည့်၍ သုပ်နိုင်ပါသည်...
တို့ဟူးကို လေးထောင့် ပုံ မထူမပါးလှီးပါ.
ပြီးရင် ဆီများများပူပူမှာ ကြွပ်အောင်ကြော်ပေးပါ.
အလယ်မှာ ဓားရာပေးခြင်းအားဖြင့် ပို၍ ကြွပ်စေပါတယ်.
Read 2138 times.
နှစ်သစ်မှာ အသစ်အသစ်သော ပရိုမိုးရှင်းတွေ၊ Menu တွေနဲ့ ကြိုဆိုလိုက်တဲ့ Gong Cha
ကိုရီးယားအစားအစာ ချစ်သူတိုင်းအတွက် Yoogane ရဲ့ 30% Off နှစ်သစ်ကူး ပရိုမိုးရှင်း
ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဆောင်းတွင်းမှာ ဟော့ပေါ့စားရင်း နွေးထွေးနိုင်ဖို့ Little Sheep ရဲ့ ၃၀% လျှော့ဈေး
နှစ်ကုန် 30% ရမယ့် Beauty In The Pot ရဲ့ Promotion